China Non-Rebreather Oxygen nkpuchi ụlọ ọrụ na suppliers | Buru Sunsun
Ihe nkpuchi ikuku oxygen nwere bag eji maka ndị ọrịa chọrọ nnukwu oxygen, iji rụọ ọrụ nke ọma itinye oxygen na ntinye kachasị elu. A na-eji ihe nkpuchi nke na-adịghị akwụghachi (NRB) maka ndị ọrịa chọrọ ọtụtụ oxygen. Ndị ọrịa na-ata ahụhụ site na mmerụ ahụ na-egbu mgbu ma ọ bụ ọrịa metụtara obi na-akpọ maka NRB na NRB na-eji nnukwu ọdọ mmiri mejupụta ebe onye ọrịa na-eku ume. A na-eme ka ekpochapu ume site na obere oghere n'akụkụ nkpuchi. A na-emechi oghere ndị a ka onye ọrịa ahụ na-ekuru ume, si otú a na-egbochi ikuku n'èzí ịbanye. Onye ọrịa ahụ na-eku ume ikuku oxygen. Flowgba ọsọ maka NRB bụ 10 ruo 15 LPM.
A na-eji nkpuchi oxygen na-ekpofu mmiri na akpa mmiri maka ndị ọrịa chọrọ ọtụtụ ikuku oxygen, iji rụọ ọrụ nke ọma na ikuku oxygen. A na-eji ihe nkpuchi nke na-adịghị akwụghachi (NRB) maka ndị ọrịa chọrọ ọtụtụ oxygen. Ndị ọrịa na-ata ahụhụ site na mmerụ ahụ na-egbu mgbu ma ọ bụ ọrịa metụtara obi na-akpọ maka NRB NRB na-eji nnukwu ọdọ mmiri na-ejupụta ebe onye ọrịa na-eku ume. A na-eme ka ekpochapu ume site na obere oghere n'akụkụ nkpuchi. A na-emechi oghere ndị a ka onye ọrịa ahụ na-ekuru ume, si otú a na-egbochi ikuku n'èzí ịbanye. Onye ọrịa ahụ na-eku ume ikuku oxygen. Flowgba ọsọ maka NRB bụ 10 ruo 15 LPM.
A na-eji ya nyefee ikuku oxygen na-eku ume na ngụgụ ndị ọrịa. Igwe ikuku oxygen na-egosipụta eriri na-agbanwe agbanwe na obere imi imi nke nwere ike ime ka ọ dabara nke ọma n'ọtụtụ nha ihu. Oxygen Mask na tubing na-abịa na 200cm oxygen ọkọnọ tubing, na doro anya na juu vinyl na-enye akwa ndidi nkasi obi na-enye ohere visual ntule. Oxygen Mask na tubing dị na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ uzo.
1. Mere nke ọgwụ na ahụ ike na ịkwanyere.
2.Adjustable imi clip emesi comforable kwesịrị ekwesị.
3. Elastic Head eriri maka Ndidi ukpụhọde
4.Smooth na feathered onu maka ndidi nkasi obi na mbenata iyatesịt ihe
5.Two agba maka nhọrọ: akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na uzo.
6.DEHP n'efu na 100% latex n'efu dị.
7. tubing ogologo nwere ike ahaziri.
1.Mask na agbanwe eriri
2. Edozi clip imi
3.With tubing abụọ
5.bag: 1000ml ma ọ bụ 600ml
6.mkpụrụ akwụkwọ ikike: CE, ISO 13485
Ihe niile ejiri rụọ Oxygen Mask, na Oxygen tubing bụ latex n'efu, dị nro ma dịkwa mma na-enweghị nkọ na ihe, Ha enweghị mmetụta na-adịghị mma na Oxygen / Medication na-agafe n'okpuru ọnọdụ ndị eji eme ihe. Ihe nkpuchi bu hypoallergenic ma gha iguzogide mgbanye na igba osiso.
1.Binye oxygen ikuku tubing na ikuku oxygen ma tinye ikuku oxygen na mmiri mmiri.
2.Choputa ikuku oxygen na-abanye na ngwaọrụ niile.
3. Debe ihe nkpuchi na ihu onye ọrịa ahụ na eriri na-agbanwe agbanwe n'okpuru ntị na gburugburu olu.
4. Jiri nwayọ dọta eriri nke eriri ahụ ruo mgbe nkpuchi ahụ nwere nchekwa.
5.Mold metal warara na nkpuchi dabara imi.
Ngwugwu Type: 1pc / Pee akpa, 100pcs / ctn.
Etiti oge: ＜25 ụbọchị
Ebe mbido: Jiangsu China
Ta nwoke: EO gas
Agba: Transperant ma ọ bụ Green
Nkpuchi Ntuziaka Ntuziaka:
1.Size XS, Infant (0-18 ọnwa) Ihe nkpuchi ihu ihu na -emepụta akara nchedo enyere ndị nne na nna na ndị na-elekọta ha aka na-enye ụmụ ọhụrụ ọgwụ aerosol.
2.Size S, Pediatric Elongated (1-5 afọ) nkpuchi ihu ihu Anatomic na -emepụta akara akara enyere ndị nne na nna na ndị na-elekọta ha aka na-enye ụmụaka obere ọgwụ aerosol.
3. Size M, Pediatric Standard (6-12 years) Ubé ibu nkpuchi ga-enye nchebe akara ka nwata ahụ na-eto. Nyere aka inye umu ogwu na ndi ekweghi iku ikuku MDI.
4. Size L, ultkpụrụ Okenye (afọ 12 +) Ntuziaka na-atụ aro ka a gbanwee ndị ọrịa ka ha gaa ngwa ngwa ọnụ ozugbo ha nwere ike - ọ na-abụkarị ihe dịka afọ 12.
5. Size XL, Okenye Elongated (12 afọ +) Ntuziaka na-atụ aro ka a gbanwee ndị ọrịa ka ha gaa ngwa ngwa ọnụ ozugbo ha nwere ike - ọ na-abụkarị ihe dịka afọ 12. Mana ihu obere ka nnukwu.
Ogologo afọ a dị n'elu bụ naanị maka ntụpọ n'ozuzu
Nke gara aga: Ọ dịghị mma Oxygen Cannula-soft Tip
Osote: Oxygen nkpuchi